यी ३ समयमा कहिल्यै पनि नसुत्नुस - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
मानिसलाई समान्यतया सुत्नु जरुरी छ सुत्नु भनेको नै आराम गर्नु हो । अधिकांश मानिसहरु दिन ५÷६ घण्टा सुत्छन् । तर यसको सुताईको समय भने मानिससले ध्यान दिन जरुरी छ । गलत समयमा सुत्दा स्वास्थ्यका लागि घातक समेत हुन सक्छ । त्यसैगरी धामिर्करुपमा पनि गलत समयमा सुत्नु नराम्रो मानिन्छ । धर्म शास्त्रहरुमा तीन समयमा सुत्नै नहुने उल्लेख छ ।
१. सुर्योदय पछिको सुताइ सूर्योदयपछि पनि सुतिरहनेसँग धनकी देवी लक्ष्मी बेखुसी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता ब्यक्तिहरुसँग जति पैसा भएपनि सन्तुष्ट रहन सक्दैनन् । सधैँ मानसिक तनाव हुन्छ । र स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन ।
२. मध्यान्नको सुताइ शास्त्रका अनुसार मध्यान्नमा पनि सुत्नु हुदैन । यतिबेला सुत्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन्छ । खासगरी दिउँसोको खानापछि सुत्ने मान्छेमा भुँडी लाग्ने समस्या देखिन्छ । मध्यान्नको सुताइले पाचन प्रणालीमा पनि समस्या आउँछ । अपच र कब्जियत पनि हुने जानकारहरु बताउँछन् । धर्मशास्त्र अनुसार पनि मध्यान्नमा सुत्ने मानिस रागी हुन्छ ।
३. सूर्यास्त समयको सुताइ सूर्यास्त अर्थात सन्ध्याकालीन समयको सुताइ पनि खराब मानिन्छ । खासगरी सुर्यास्तको समयमा पुजा अर्चना गर्ने समय भएका कारण्ँ पनि यतिबेला सुत्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ । शास्त्रका अनुसार विनाकारण साँझको समयमा सुत्ने व्यक्ति सफलता पाउन सक्दैनन् । धामिर्क मान्यता अनुसार सूर्यास्तको समयमा सबै देवी देवता पृथ्वीको भ्रमण गर्ने भएकाले पनि यस समयमा आलस्य देखाउनु हुँदैन ।